Drivego - Aidosti kansainvälinen, monikulttuurisuuteen erikoistunut autokoulu
Aidosti kansainvälinen, monikulttuurisuuteen erikoistunut autokoulu
International, friendly and professional driving school
Waxaanu nahay iskuul heer caalamiya, iskuulka wadista gaadiidka iyo dhaqamadiisa kala duwan, halkaas oo macaamiisha aanu ula dhaqano si gaara isla markaana ugu shaqayno luuqadooda gaarka ah ee ay fahmayaan.
Tababarayaasha wadooyinka waa kuwo si fudud loo wajihi karo, xirfadle sare oo si gaar ah loo tababaray. Hadafkayagu waa inaan ku tababbarno darawalada tababar nabadgelyo, mid bulsheed iyo kuwa deegaanka ah mustaqbalka.
Halbeegayaga waxaa ka mid ah saaxiibtinimo, kalsooni, isku dhawaanshaha iyo daryeelka deegaanka.
Tababarkeena qoraalka ah waxaa ka mid ah mowduucyo aan lagu dari Karin casharada wax is-barashada.
Waxbarashada qoraalka ah waxay ku fududahay fahankeedu marka aad adigu isbarto, taasina waxay kuu dhaqaalaynaysaa kharash fara badan oo kaa bixi lahaa.
Marka casharada qoraalka lagusoo qaato waxaa lagu dabiqi karaa xiliga wadista, looma baahna xiliga wadista lagujiro in lagu baro casharada wadista.
Liikenneopettaja Abdikarim Ahmed 045 140 5660
Drivegon toimisto palvelee
ma-ti 12-17, ke-to 12-18, pe 12-16
Asiakaspalvelu (klo 7-21) 050 414 2900
Konstaapelinkatu 4, Ostoskeskus Galleria, 1. kr,
02650 Espoo. Leppävaaran asemalta 150 m
Drivego.eu - Qiimaha
Autokoulukurssi (B), Paketti 1, hinta 899 €
- Hordhac iyo is diwaangelin 1h
- 8 h teoriga (EAS+RTK -teoriat) fasalka ama internetka.
- 1 h Tababarka imtixamka sharciga
-7 h wadida simulaattorka, 2h kala ah mugdiga iyo taraaraxa.
-7 h wadid baabur
- Istixmaalka baburka imtixaamka 1.
- Adeega xafiiska.
Autokoulukurssi (B), Paketti 2, hinta 1190 €
- 8 h sharci barasho (EAS+RTK -teoriat) fasalka ama internetka.
- Tababarka sharciga internetka-teoriakoeharjoittelu
- 2 h kala ah mugdiga iyo taraaraxa (Simulaatorka)
- 12 h baabur wadid ah.
- Istixmaalka baburka imtixaamka 1. ajokokeessa
- hadi xisada taraaraxa baaburka, ratamaksu (80 €)
Autokoulukurssi (B), Paketti 3, hinta 1449 €
- 16 h baabur wadid ah.
Opetuslupapaketti 1-Barashada gaarka ah 89€
- Eas 4h sharci barasho
- Tababarka sharciga- intenetka
Imtixaam wadida 1 h 68 € (baaburka macmiisha)
Imtixaamka baburka dowlada- 1,5 h 120 €
Wadida baburka 1h 80 €
5 h baabur wadid ah 345 €
Waxaan halkan idinku sharaxaynaa sida loo istimaalo fasalada sharciga haga INTERNETKA iyo barnaamigka BLACKBORDka! Wuxuu kuu fudeyayaa ka soo qaybgalka haga intenerka, hadii aad iman karin xiisadaha fasalka ama aad degentahay meel naga dheer, tusaale ahaan gobol kale!
KOMBUTERKA HADAD KA ISTIMAALAYSO:
KOMBUTERKA waa inuu lahaadaa mikrofon iyo kamera shaqaynaya, Internetkaguna noqdaa nooca loo yaqaan Chrome.
Hadii aad isticmaalayso iPhone ama iPad:
Soo dejiso: App Storesta Blackboard App kaasi oo ah (bluug, qalin jaalle ahi ku sawiran yahay.)
Markaad soo kusoo dejisato telefoonkaaga. Waxaan kuusoo naga helaysaa email ku jirto link ama ciiwaanka aadka soo geleyso fasalka ama glaaska.
Iphoneku wuxu isticmaalaa internet loo yaqaan SAFARI isagaad kasoo geeysaa. Sidaas ayuu BLACKBOARD APPka ahi ku shidmayaa, intaas kadib wuxuu ku weydiinayaa progamkaad ku furayso.
suaal: ”keebad ku furaysaa Blackboard ama Instructror?” Dooro ”Blackboard.” kadib wuxuu ku weydiinayaa magacaaga, markaad ku qorto waxaad kusoo biiraysaa glaaska sharciga ama theoriga.
Qofka haysta Android-:
Wuxuu kasoo geli karaa internet telefonka ama tabletka toos.
Telefoonnada: samsung, oneplus, honor, huawei,htc iyo wixii la mid ah toos ayay usoo geligaraan.
Muxiimaddu waa in aad kasoo gashaa emailka ama link aad anaga nagahelayso!
· Copyright 2020 · DriveGo.eu ·